I-PayMaya Apk Landa i-V2.63.1 Mahhala Ye-Android [Wallet]
Lapha ngizokwabelana ngolunye lwezinhlelo zokusebenza ezivikeleke kakhulu ze-E-Wallet. Empeleni ngikhuluma nge-PayMaya Apk manje ongayilanda ngokusebenzisa isixhumanisi esinikezwe ngezansi.
Kukhawulelwe esifundeni esithile engizokwabelana ngaso futhi ekubuyekezweni. Ungaqhubeka ngokwazi ngezici eziyisisekelo zohlelo lokusebenza ngemuva kokufunda konke lokhu kubuyekezwa.
Yini i-PayMaya Apk?
Ungayilanda kanjani futhi uyisebenzise i-PayMaya Apk?
I-PayMaya Apk i-e-wallet ongayisebenzisa ukwengeza imidlalo, ukudlulisa izimali, ukufaka imali, nokunye okuningi. Inikeza ikhadi elibonakalayo kulabo abafuna ukuthenga ku-inthanethi. Ungaba futhi nenketho yokubhuka amathikithi endiza online ngokusebenzisa indlela yayo yokukhokha ephephile.
Into enhle ukuthi ungayilanda mahhala futhi inikeze izinsizakalo ngemali eshibhile. Ungakwazi phezulu noma ukuthenga i-UC yePUBG Mobile bese uthola inani elingenamkhawulo lamadayimane we-Mobile Legends Bang Bang. Noma kukhona eminye imidlalo eminingi ongayengeza.
Ingesinye sezikhwama ezivikeleke kakhulu ePhilippines. Ngakho-ke, ngokuyisisekelo, yenzelwe abantu basePhilipines. Ungalanda futhi ujoyine uhlelo lokusebenza ukudlulisa izimali zakho ku-akhawunti yakho yasebhange. Ngakho-ke, ngalolu hlelo lokusebenza, ungakusebenzisa lokho ukuthengiselana okuku-inthanethi.
Uzothola inketho yokukhokha kulezo zitolo noma ezitolo ezinkulu ezisekela ama-ATM noma amakhadi asebhange. Ngakho-ke, ungaxhuma noma ulungiselele ikhadi lakho elilukhuni le-PayMaya kuhlelo lokusebenza bese wenza izinkokhelo. Ungaqhubeka uphathe ibhalansi yakho neminye imininingwane.
Uma wabelana nge-SMS ne-imeyili izaziso zokuthengiselana noma zomsebenzi ngamunye. Ngakho-ke, ngalokho, ungagcina ibhalansi yakho nesikhwama sakho semali kuphephile kubaduni nakubantu ongabazi. Zama ezinye izikhwama zemali njenge Thola uDana futhi I-Bajaj Wallet kepha lezi zisebenza ezifundeni ezahlukahlukene.
Usayizi 55.09 MB
Igama lephakheji com.paymaya
Unjiniyela PayMaya Philippines, Inc.
Iyadingeka i-Android 4.1 andÂ Up
Nawa amaphuzu abalulekile engidinga ukuwabelana nawe. Ngoba ngineqiniso lokuthi iningi labantu lifuna ukwazi ukuthi i-PayMaya Apk inikezani. Ngakho-ke, ngakho-ke ngizochaza ezinye zezinto ezibaluleke kakhulu kuwe. Lezi yizici ezilandelayo.
Kumahhala ukulanda kumakhalekhukhwini we-Android.
Ungenza ukuthengiselana ngamanani ashibhile.
Dlulisela imali kwamanye ama-akhawunti asebhange.
Ungakhokha ezitolo nasezitolo ezinkulu ezisekela ama-ATM namakhadi asebhange.
Bhuka amathikithi endiza online.
Kuphephile futhi uthole ukushintshwa kwe-SMS.
Phezulu kwemidlalo eminingi oyidlalayo ePhilipine.
Isibonisi esilula nesisebenziseka kalula.
Ukuze uzuze ku-PayMaya App, udinga ukulanda i-Apk yayo bese uyifaka efonini yakho. Lapha kuleli khasi, uzothola izixhumanisi ezimbili eziqondile kuqala eyodwa inikezwa ekuqaleni kuthi eyesibili inikezwe ekugcineni.
Ngakho-ke, ungasebenzisa noma yiziphi izixhumanisi ukuthola i-Apk. Ngemuva kwesikhathi ungathepha kulelo fayela bese ulifaka efonini yakho. Manje udinga ukwethula lolo hlelo lokusebenza efonini yakho bese unikeza zonke izimvume eziceliwe.
Chofoza inkinobho yokubhalisa uma uyisebenzisa okokuqala. Bese unikeza yonke imininingwane edingekayo. Manje usungahambisa imininingwane bese uqinisekisa i-akhawunti yakho.
Lokho konke kusuka kulokhu kubuyekezwa lapho ngike ngazama ukukwazisa ngePayMaya Apk. Uma unesifiso, ungasilanda ngokusebenzisa isixhumanisi esinikezwe ngezansi. Kuyinto inguqulo yakamuva futhi esemthethweni yohlelo lokusebenza.
Posted in AppsUmake I-PayMaya Apk, Uhlelo lokusebenza lwe-PayMaya, Ukulanda kwe-PayMaya
Ama-copyright © 2004-2021 [I-APKShelf]